Home Wararka Yaa qaadaya mas’uuliyada xasuuqa shacab ee Qoor Qoor la damacsan yahay Guriceel
Yaa qaadaya mas’uuliyada xasuuqa shacab ee Qoor Qoor la damacsan yahay Guriceel
Madaxweyne Qoor Qoor oo xalay kulan kama danbeeysa la yeeshay qaar kamida saraakiishiisa ciidanka ayaa ku amray in dagaal culus lagu qaado magaalada Guriceel. Dagaalkaas ayaa waxaa lagu wadaa in ay qayb ka qaataan ciidamo isbahaysi ah oo laga soo abaabulay magaalaada Muqdisho.
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay MOL ayaa sheegaya dagaalkaas oo ay ka qayb qaadna doonaan ciidamada laga soo daadgurayay Muqdisho ay si toos ah weerar ugu qaadi doona magalaada Guriceel iyada oo aan loo aaba yeeli doonin shacabka iyo marada ku dhaqan magaaladaaas.
Dad badan ayaa rumeysan in dagaalka noocaas ah uu isku badali doono mid qabiil iyada oo ay adkaan doonto in beesha Ceyr ay daawadaan xasuuq lagu sameeyo maradooda iyo magaaladooda. Su’aalaha la isweydiinaya ayaa ah yaa qaadi doono xasuuqa shacab ee 24 saac ee soo socata ka dhici doona magaalada Guriceel?